मानसिक रोग: कति प्रकारको हुन्छ फोयिबा, यसको कारण र उपचार के ? | सुदुरपश्चिम खबर
मानसिक रोग: कति प्रकारको हुन्छ फोयिबा, यसको कारण र उपचार के ?
आनुवंशिक ः अनुसन्धानले देखाएको छ कि परिवारमा एक निश्चित प्रकारको फोबिया छ भने अर्काे सदस्यमा पनि त्यो समस्या देखिने जोखिम बढी हुन्छ ।
जीवनका अनुभवहरु ः धेरै प्रकारका फोबियास वास्तविक जीवनका घटनाहरुसँग सम्बन्धित हुन्छन् । उदाहरणको लागि एउटा कुकुरसँग डर लाग्नुको पछि सानो उमेरमा उसलाई कुकुरले टोकेको हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । सामाजिक फोबिया एक नाबालिग उमेरमा हुने घटनाका कारण विकास भएको हुन सक्छ ।
यस अन्तर्गत व्यवहार परिमार्जन, प्रविधिको प्रयोग गरेर फोबिया हटाउने विधि आदिको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । अनलाइनखबर बाट सभार